NUSOJ “Waa in la xukumaa dilayaasha suxufiyiinta si loo soo afjaro cadaalad-darrada taariikhiga ah iyo dhaqanka ciqaab la’aanta.” – Radio Daljir
NUSOJ “Waa in la xukumaa dilayaasha suxufiyiinta si loo soo afjaro cadaalad-darrada taariikhiga ah iyo dhaqanka ciqaab la’aanta.”
Maajo 22, 2020 2:13 g 0
Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa si rasmi ah maxkamada derejada koowaad ee gobolka Banaadir ugu gudbiyey gal dacwadeedka in baaritaan lagu sameeyo lana marsiiyo ciqaabta ay mutaysteen tuhmanayaasha dilka in ka badan 50 suxufi oo lagu diley Soomaaliya.
Arbacadii, 20ka May 2020, NUSOJ waxay u gudbisay codsi Maxkamadda Gobolka Banaadir taasoo ururku ku codsanayey in maxkamadu ku hagto xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud inuu sameeyo baaritaan deg deg ah, madax banaan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan dilalka naxariis darada ah ee loo geysto suxufiyiinta.
Xafiiska Xeer ilaaliyaha guud ayay ka dalbadeen inuu soo bandhigo baaritaanada kiisaska dilalka suxufiyiinta ah mudo 3 bilood gudahood ah.
Gudoomiyaha maxkamada derejeda koowaad ee gobolka Banaadir CabdiKhadar Maxamed Xasan ayaa aqbalay codsiga ururka NUSOJ isagoo ka dhegeystey soo gudbinta dalabka ururka ayuu khamiistii soo saaray warqad xeer ilaalinta lagu amrayo baaritaanada dilalka wariyayaasha.
“Waxaan aaminsanahay inaysan Soomaaliya ka suuli karin ficilada naxariis darrada ah ee lagula kaco suxufiyiinta taasoo ah maxsuulka dhaqanka ciqaab la’aanta ah iyada oo aan la sameyn baaritaan rasmi ah si loo ogaado runta loona raadiyo caddaaladda suxufiyiinta la dilay,” ayuu yiri Cumar Faaruuq Cusmaan Xoghayaha Guud ee NUSOJ.
Ururka NUSOJ ayaa dalbaday in la dabagalo nala ciqaabo kuwa abaabula dilalka ka dhanka ah suxufiyiinta Soomaaliyeed.
“Hadafkayaga kaliya waa maxkamada iyo xeer ilaaliyaha guud inaan isku dayno oo ciqaabno qorsheeyayaasha iyo maskaxaha abaabula dilalka qorshaysan ee suxufiyiinta”. ayuu hadalkiisa raaciyey xoghayaha NUSOJ.
Codsiga Ururka NUSOJ ee maxkamada loo gudbiyey ayaa lagu sheegay in dilalka suxufiyiintu aysan xad gudub ku ahayn xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo keliya, balse ay si dhow xad gudub joogto ah ugu yihiin qodobka 13’aad ee Dastuurka Soomaaliya oo sheegaya xaqa nolosha iyo qodobka 18’aad oo dhigaya xoriyada hadalka iyo ra’yiga.
Ururka wuxuu kaloo hoosta ka xariiqay in baaritaanada la xiriira weerarada dilaaga ah ee loo geysto suxufiyiinta ay u baahan yihiin feejignaan iyo khibrad gaar ah si loo hubiyo in xiriirka ka dhexeeyo dambiga iyo howlaha saxafiga.
“Codsigan maxkamadeed, kaliya maahan inaan caqabad ku nahay ciqaab la’aanta laakiin waxaan sidoo kale dooneynaa inaan i u sii gudubno wadada cadaalada iyo wadada loo maro cadeynta runta, kaasoo saxafiyiinta dhibanaha ah iyo qoysaskooda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin” ayuu hadalkiisa raaciyey xoghayaha guud ee NUSOJ Cumar Faaruuq Cismaan.
Jawaab deg deg ah oo ay sameeyeen garsoorka oo ah baarista iyo soo oogida dacwadaha kuwa lagu tuhmayo danbiyada dilalka suxufiyiinta waxay muhiim u tahay hubinta kalsoonida shacabka ee ku aaddan dhowrista sharciga iyo ka hortagga falalka sharci darada ah. dadka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan runta waxa dhacay, iyo sidoo kale sababihii iyo duruufaha ay ku kaceen dambiyada gaboodfalka sida dilalka suxufiyiinta. ayaa lagu yiri warqada NUSOJ u gudbisey maxkamada.
NUSOJ waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in garsoorku fariin adag u diraan kuwa dilalka geysta oo ah inaan garsoorku u dulqaadan doonin weerarada ka dhanka ah suxufiyiinta iyo sii wadida ciqaab la’aanta danbiyada.
Maamulka Somaliland oo mamnuucay in la isku yimaado maalmo ciidka (dhegayso)